RUBAL DHANKAR အသက်၊ အမြင့်၊ အလေးချိန်၊ ဇနီး၊ မိသားစု၊ - ဖျော်ဖြေရေး
Rubal Dhankar အသက်၊ အမြင့်၊ အလေးချိန်၊ ဇနီး၊ မိသားစု၊
အလုပ်အကိုင် ရဲသား, ကြံ့ခိုင်ရေးသင်တန်းဆရာ & အကြောင်းအရာဖန်တီးသူ
ကျော်ကြားသည် Roadies X4 တွင် 2016 တွင်ပါဝင်သူအဖြစ်ပြသခဲ့သည်
ပေ & လက်မ၌တည်၏ - ၆ '၁ '
အလေးချိန် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ကီလိုဂရမ်၌တည်၏ -95 ကီလိုဂရမ်
ပေါင်ထဲမှာ -209 ပေါင်
မွေးနေ့ ၆ Augustဂုတ် ၁၉၈၈ (ကြာသပတေးနေ့)
အသက် (၂၀၂၀ တွင်ကဲ့သို့) ၃၃ နှစ်
မွေးရပ်မြေ Narela, ဒေလီ
ဇာတိမြို့ Faizpur Ninana ကျေးရွာ၊ Baghpat၊ Uttar Pradesh ပြည်နယ်
ကျောင်း Govt Boys အဆင့်မြင့်အလယ်တန်းကျောင်းအမှတ် (၂)၊ နရလာ၊ ဒေလီ
ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်း B.com (ဒေလီတက္ကသိုလ်)  Youtube
ဘာသာတရား ဟိန္ဒူဘာသာ [နှစ်ခု] Youtube
ဇာတ် Jaat  Youtube
အစားအစာအလေ့အထ သက်သတ်လွတ်မဟုတ်သူ  Youtube
လက်ထပ်ထိမ်းမြားရက် ၁၆ မတ်
ဇနီး Deepa Dhankar
ကလေးများ သူတို့က - Aahnik Dhankar
သမီး - အမည်မသိပါ
မိဘများ ဖခင် - Kanwarpal Dhankar (ဒေလီရဲမှ ASI)
အမေ - Munesh Dhankar
မောင်နှမများ အစ်ကို - Vivek Dhankar (ဒေလီအစိုးရအမှုထမ်း)
မင်းသား Amitabh Bachchan
မင်းသမီး Aishwarya Rai Bachchan
ရုပ်ရှင်များ) Roti Kapda Aur Makaan (1974) & Veer Zara (2004)
ကားစုဆောင်းခြင်း Kia Seltos
စက်ဘီးငွေကောက်ခံ တော်ဝင် Enfield
jija ji ghar တန်းတူ hai သွန်း
Rubal Dhankar အကြောင်းလူသိနည်းသောအချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Rubal Dhankar သည်ကြံ့ခိုင်ရေးသင်တန်းဆရာ၊ အကြောင်းအရာဖန်တီးသူနှင့်ဒေလီရဲတပ်ဖွဲ့မှူးဖြစ်သည်။ သူသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Roadies X4 တွင်ထင်ရှားပြီးနောက်လူအများရှေ့တွင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
သူ့ကိုယ်သူကာယပညာရှင်ဖြစ်သည့်ရူဘန်၏ဖခင်သည်သူ၏သားကိုအားကစားနှင့်ကာယလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ရန်ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် Rubal ၌စိတ်ကူးစိတ်သန်းတစ်ခုရရှိခဲ့ပြီးဘဝ၌ပျော်ရွှင်မှုသည်သင့်လျော်သောခန္ဓာကိုယ်နှင့်လာသည်။
Jo kehte သင်၏သင်တန်းဆရာကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါသည် Kya vo apne dad ke aise pic dikha sakte h ကျွန်ုပ်၏သူရဲကောင်း n ကျွန်ုပ်၏သင်တန်းပို့ချသူအဖေ❤️❤️❤️ထင်မြင်ချက်များ ??? #indianfitneslover #health #fitness #fit #fitnessmodel #fitnessaddict #workout #bodybuilding #gym #cardio #indianbodybuidling #training #photooftheday #strong #motivation #instagood #lifestyle #diet #dietplan #rdfitness #Exercise #daily #fitness #channel # like4like # follow4follow
မျှဝေသည် Rubal Dhankar 8:53 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 18, 2018 ရက်တွင် (@rubaldhankar)
Rubal ကသူ၏ဖခင်ခြေရာကိုလိုက်ရန်မောင်းနှင်ခဲ့သည်။ သူသည်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုငယ်စဉ်ကတည်းကစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ဒေလီရဲတပ်ဖွဲ့သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။
Rubal Dhankar သူ့ဖခင်နှင့်အတူ
Dhankar ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကသတ္တိရှိပြီးခိုင်မာတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ဒေလီရဲတပ်ဖွဲ့စစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်မှီတစ်ပတ်အလိုတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောဘဝ၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သူသည်ပါးစပ်ဖြင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ပြီးမှားယွင်းစွာကုသမှုခံယူရန်အခွင့်အလမ်းများကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သူကအရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူး။ သူသည်ပိုမိုအားကောင်းလာပြီးနောက်နှစ်တွင်ဖြေဆိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ မျက်နှာတစ်ဝက်သွက်ချာပါဒခွဲစိတ်ခြင်း ba အာရုံကြောပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်မျက်နှာတစ်ဝက် paralysis ho style ek မျက်စိ har khuli rehti thi မိုးသည်းထန်စွာဆေးများ ki vajah se ဆံပင် bhi jhad gye the ။ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက် ၆ လအလိုတွင်အအေးခံဓာတ်သည်အစာချေအစာနှင့်အစာချေဖျက်နိုင်သည့်အတွက်ပါးစပ်သည်ခန္ဓာကိုယ်၏အံသွားများကိုအံသွားခန္ဓာကိုယ်၏အဆီအရည်ကိုအသုံးပြုသည်။ အလေ့အကျင့်ရူပဗေဒပညာရှင်သည်ဆရာဝန်မာနကုထုံး၊ ကြွက်သားမှတ်ဥာဏ်ခန္ဓာကိုယ်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပြန်လည်နာလန်ထူလာသည်။ ဟုတ်ကဲ့, မှ jaldi hi ဒေလီရဲတပ်ဖွဲ့သည် Kar li သို့မဟုတ်ထင်းရူးလမ်းများတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်သို့မဟုတ်ငါ့အားနေရာချခြင်း, ငါ့ကိုနေရာချ nahi aane se မီတာ Haar နဂါး Maan ne vaala, ye jaat bahut tedha h ?? ။ Agar မှဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဗီဒီယို youtube မှ? ။ ။ ဘယ်တော့မှအလျှော့မပေးနဲ့ ???
မျှဝေသည် Rubal Dhankar 7:41 pm တွင် PST မှာဒီဇင်ဘာလ 2, 2019 ရက်တွင် (@rubaldhankar)
လက်ထပ်ပြီးနောက်၌ပင်သူသည်သူ့ဘ ၀ နှင့်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုကိုလုပ်ချင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သူဟာသူ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတဲ့လူအနည်းငယ်ကသူ့ကိုစိတ်ဓာတ်ကျစေခဲ့တယ်။
စော်ကားမှုကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသူသည် Roadies X4 စာရင်းစစ်ဆေးရန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူသည်ရွေးချယ်ခံရရုံသာမကအခြားပြိုင်ပွဲဝင်များထက်လည်းပြသသွားခဲ့သည်။ ဆီမီးဖိုင်နယ်တွင်ကံဆိုးစွာသောအဖြစ်အပျက်သည်သူ၏နှင်ထုတ်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်လာပြီးပြပွဲအနိုင်ရရှိရန်သူ၏လက်ချောင်းများမှတဆင့်ဖြတ်သန်းသွားခဲ့သည်။
Roadies X4 တွင်ရွေးချယ်ပြီးနောက် Rannvijay Singha နှင့် Rubal Dhankar
နှင်ထုတ်ခြင်းသည်သူ့အတွက်အလွန်ထိတ်လန့်စရာဖြစ်ခဲ့သည်; ဒါကြောင့်စိတ်ကျရောဂါခဲ့သည်။ သူသည်ပြပွဲသည်သူ၏ဘ ၀ ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဒေလီရဲတပ်ဖွဲ့တွင်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခြင်းကိုပြန်လည်အမှတ်ရခြင်းဖြင့်စိတ်ဒဏ်ရာမှလွတ်မြောက်ရန်မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်သတိရစေခဲ့သည်။
အဲဒီအချိန်ကစပြီးသူဟာသူ့ကိုပြပွဲမှာကြည့်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့တယ်။ သူ၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်မှလူများထံမှမက်ဆေ့ခ်ျအမြောက်အများကိုသူလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သူသည်ရဲတပ်ဖွဲ့တွင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး အဖြစ်အလုပ်လုပ်စဉ်၎င်းသည်ဤမျှလောက်ကြီးမားသောကိုယ်ခန္ဓာတည်ဆောက်ပုံနှင့်ထိန်းသိမ်းထားပုံကိုမေးခွန်းများစွာမေးခဲ့သည်။
ထို့နောက်သူသည်ကြည့်ရှုသူများထံမှကြီးမားသောတုန့်ပြန်မှုရရှိခဲ့သည့် YouTube တွင်သူ၏“ Rubal Dhankar” အမည်ဖြင့်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ရုပ်သံလိုင်းသည်နောက်လိုက် ၁.၆ သန်းကျော်ရှိသည်။  Rubal Dhankar
ထို့အပြင်သူသည်နောက်ထပ် YouTube လမ်းကြောင်းနှစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ 'Rowdy Dhankar' (ဟာသနှင့်လူမှုရေးအကြောင်းအရာများဆိုင်ရာဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာအတွက်) & (Vlogs အတွက်) 'Rowdy Vlogs' ။  Rowdy Dhankar  Rowdy Vlogs
Rubal သည်ဒေလီရဲတပ်ဖွဲ့မှပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် roadies စစ်ဆေးခြင်းတွင်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးမထင်မှတ်နိုင်သောအရာသည် ၁၉.၅ လက်မရှိသည့်ကြီးမားသော biceps ရှိသည်။
↑၁၊ ↑နှစ် ↑၃ Youtube
↑၅ Rubal Dhankar
↑၆ Rowdy Dhankar
↑၇ Rowdy Vlogs
ဗိုင်းရပ်စ် kohli အိမ်သူအိမ်သား၏ pics
ninja punjabi အဆိုတော်မွေးနေ့
ဟိန္ဒူဟုခေါ်ဝေါ်သော telugu ရုပ်ရှင်စာရင်း
virat Kohli နောက်ဆုံးဆံပင် 2016